N'ihe dị ka osimiri 365 dị ọcha nke mmiri turquoise dị ọcha, agwaetiti ndị na-ekpo ọkụ nke Antigua na Barbuda bụ paradaịs na-adọrọ adọrọ ma were ya dịka otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa. N'ihi ya, njem bụ isi ihe na-akpata GDP ma na -emepụta ihe dị ka 60% nke ego agwaetiti ahụ, yana ahịa dị iche iche bụ US, Canada na Europe.
Ego bụ Eastern Caribbean dollar (EC $), nke a na-agbanye na US $ na 2.70 EC $ / US $. Antigua na Barbuda bụ onye otu United Nations (UN), British Commonwealth, Caricom na oftù Amerịka (OAS), n’etiti ọtụtụ mba ụwa ndị ọzọ. Ndị jidere paspọtụ Antigua na Barbudan na-enwe ọ visaụ njem njem visa n'efu karịa mba 150, gụnyere United Kingdom na mba nke mpaghara Schengen. Ndị jidere paspọtụ a, dịka mba Caribbean niile, chọrọ visa ịbanye US n'ihi na ha abụghị ndị otu Visa Waiver Program.